-‘सेयर बजारमा सधै रमिता छ’ बिश्लेषक हरिबोल काफ्लेको विश्लेषण :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
उपन्यासकार ईन्द्रवहादुर राईको चर्चित उपन्यास, आज रमिता छ भन्ने उपन्यासको लाई वास्तविक समालोचना गर्न त अफ्ठेरो छ ।
तर त्यहि उपन्यासको शिर्षक नै नेपालको सेयर वजारको व्यथितिलाई भिराइदिंदा अफ्ठेरो नपर्ला, यहाँ सधै रमिता छ ।
किनकि यस अगाडि पनि लगानीकर्ताले फोनको भरपुर उपयोग गरेका छन् । अहिलेको समयमा कतिपय व्रोकरहरुले परोक्ष फोनवाट आएको सन्देशलाई कुरा गर्दागर्दै नेप्सेमा आदेश प्रविष्ट गरिसकेका हुन्छन् ।
व्रोकरका लागि ईमेल, एप्स वा अन्य सिस्टमको म्यासेज पढेर पुन त्यसको आदेश प्रविष्ट गर्नु कति भरपर्दो प्रणालि हो, त्यो सवैले अनुभुति गरिसकेका छन् । वरु यो किसिमको सिस्टमको दुहाई आज आएर धितोपत्र वोर्डले गर्नु कतिको वुद्धिमानि हो, त्यो उसले छिटो सोच्नु आवश्यक छ ।
तर, त्यो भन्दा वढि ईमेल, एप्स वा अर्को सिस्टमको प्रयोगमार्फत लगानीकर्ताको आदेश मात्र प्राप्त गर्नु प्रणालि कस्तो सेमि अनलाईन हो, यो बारेमा सम्विन्धत निकायको स्पष्टिकरण आउनु आवश्यक छ ।
सेमि अनलाईनको अर्थ हुन्छ, लगानीकर्ताले अनलाईनवाट नै आदेश दिन्छन् र मात्र व्रोकरले भेरिफाई वटम क्लिक गर्छ । फष्ट ईन फष्ट कम आदेशलाई भेरिफाई वा ईग्नोर मात्रगर्ने प्रणालिलाई उसले अवलम्वन गर्नुसम्मलाई सेमि अनलाईन मान्न सकिन्छ ।
लाटाको देशमा गाँडा तन्नेरी भने झै नेपालको वजारमा कँहिनभएको सिस्टम सेमि अनलाईनको समुद्घाटन भएको छ, त्यो पनि वढो तामझामका साथ । आखिरमा त्यो किन? त्यो सरासर लगानीकर्तालाई झुुक्याउनभन्दा फरक पर्दैन ।
‘सेमी अनलाइन’ प्रणालीको सुरु, लगानीकर्ताले कसरी दिने सेयर खरिद बिक्रि आदेश ?
२.६ अंकले बढेको बजारमा ३० करोडको कारोबार
सि.एम.ए तथा अ.हे.ब व्यावस्थापनमा सरकारको ढिलाई किन ?
गैर कानूनी ढंगबाट सेयर विक्री खुल्ला गर्दै कम्पनीहरु